Hilib hilib lagu kariyey baradho, malqacad jiilaalka | Cunnooyinka jikada
Hilib hilib leh baradho, isha tamarta
Maanta waxaan kuu keenay fuud wanaagsan oo malqacadihii hore caan u ahaa. Bari hilib hilib leh baradho Waxay soo saraan qof dhintay maaddaama ay ku siinayaan tamar badan.
Cuntadan hilibka iyo maraqa baradhada waa mid aad u badan wanaagsan maalmaha jiilaalka, maxaa yeelay weel wanaagsan oo qaaddo diiran oo kan oo kale ah wuxuu kaa dhigayaa inaad si dhakhso leh u kululaato.
300g oo hilib doofaar la jarjaray.
1 basal buuran.
1 basbaas dawan weyn.
2 yaanyo dhexdhexaad ah.
Marka hore, waxaan u gudbin doonaa qaybaha hilib In yar oo bur ah, xoogaa yar oo si aad u wanaagsan u rux gacmahaaga si aad uga saarto wixii dheeraadka ah. Dheri dheri ah, waxaan ku shubi doonaa xoogaa saliid ah oo isku shiil. Talaabadani waxaa loo yaqaan qufulka hilibka. Markay dahabi tahay, waanu ka saaraynaa oo hadhow ayaanu kaydsan doonnaa.
Markaas waxaan samayn doonaa a lagu kariyey khudaarta. Si tan loo sameeyo, waan fiiqeynaa, dhaqeynaa oo jaraynaa dhammaan maaddooyinka. Cabirku dhib malahan maadaama aan gadaal ka garaaci doonno, laakiin haddii aad rabto inaad ka tagto dhammaantood, kaliya waa inaad ka gooysaa kuwa fiican iyo kuwa yaryar.
Ka dib, isla dherigii dhegta ahaa ee aan ku shiilanay hilibkii hore, waxaan dhigi doonaa taariikh wanaagsan oo saliid saytuun ah waxaanan ku dari doonaa toonta iyo basasha. Markay badaleyso midabkeeda waxyar (bunni dahab ah), waxaan ku dari doonaa basbaas, ka dibna yaanyada. Waxaan u oggolaan doonnaa inaan wax karino in yar 5-8 min si ay biyuhu u yaraadaan.
Sidaan horeyba kuugu sheegay waad garaaci kartaa ama maya. Ma jiro wax farqi ah, haddii aad garaacdid, dib ugu celi dherigii, haddii kalese sidaas ayaad uga tagaysaa. Iyadoo aan loo eegin haddii aad garaacdo ama aadan garaacin, hadda waa markiisa hilibka ku dar. Waxaan sidoo kale ku dari doonnaa milix, saffron, thyme, biyo si loo daboolo hilibka iyo buufin khamri cad. Waxaan xiri doonnaa makiinada kariyaha cadaadiya markii dhawaaqa waalka uu bilowdo waxaan xisaabin doonaa 15 min.
Inta waqtigaas dhaafto, waanu xoqaynaa oo waan maydhaynaa baradhada. Goynta baradhada waa inay noqotaa mid aan caadi ahayn, inta aan jarjarayna waxaan kor u qaadnaa mindida wax yar si aan u maqalno guji. Tan waxaa loo sameeyaa si fuud ka dhumuc weyn u soo baxo, maaddaama oo baradhadu ku jirto 'dhumuc' dabiici ah oo loo yaqaan istaarijka.
Waqtigaas kadib, waxaan sugi doonaa in yar oo hawada hawada ku jirta dheriga inay baxaan. Waxaan u gudbi doonaa fur oo ku dar baradhada iyo in yar oo biyo ah (hadaad aragto wax yar oo qalalan). Mar labaad ayaan xiri doonnaa, markanna waxaan karineynaa qiyaastii 5-8 daqiiqo kadib markaan maqalno dhawaaqa biiyaha.
Waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysato waxaas cajiibka ah ee weyn hilib hilib leh baradho. Bon yar!
Macluumaad dheeraad ah - Cunto cod
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cuntada
Waqtiga diyaarinta Daqiiqado 20
Waqtiga karinta Daqiiqado 25
Wadarta waqtiga Daqiiqado 45
Kiilooriyada halkii adeeg 358
Cunnooyinka Hilibka, Cunnooyinka Mashiinka iyo maraqa
Waxaan jeclaa cunto karinta ilaa caruurnimadaydii, waqtigan xaadirka ah waxaan u heelan ahay inaan sawiro cuntadeyda iyo hagaajinta wax kasta oo aan bartay sanadihii la soo dhaafay, ... Eeg astaanta>
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Hilib hilib leh baradho, isha tamarta
Buskud laba jibbaaran oo rooti ah, yicib iyo shukulaato
Burritos basbaas leh, nooca Isbaanishka